नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी बड ब्लुटुथ हेडफोनहरू भेट्नुहोस् ग्याजेट समाचार
नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी बड ब्लुटुथ हेडफोनहरू भेट्नुहोस्
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | Accesorios, छवि र ध्वनी, प्रस्तुतिकरण
हामीसँग फेब्रुअरी २० क्यालेन्डरमा लामो समयको लागि चिन्ह लगाइएको थियो। आज अन्तत: सामसु'sको दिन थियो, र यो प्रतिक्षा लायक थियो। अन्तत: उपलब्ध विभिन्न संस्करणहरूमा आजको साँचो पात्र भेट्ने बाहेक, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S20, त्यहाँ थियो फर्मका अन्य उपकरणहरूले पनि आशा बढाए। यस हप्ताको बारेमा पनि धेरै कुराकानी भएको थियो सामसु'sका नयाँ हेडफोनहरू। तर यो पूर्ण रूपमा निश्चित थिएन कि हामीसँग उनीहरूलाई यो दिउँसो भेट्ने अवसर छ।
यो नयाँ घटना ढाँचामा ल्याइएको धेरै आश्चर्य पछि, को लागी पनि ठाउँ थियो नयाँ ग्यालक्सी बड्स सामसु fromबाट, हेडफोनहरू अन्ततः एप्पलको आफ्नै एयरपडहरूमा उभिन तयार छन्। जटिलता बिना र उनीहरूको कुनै पनि अन्य मोडेलमा फाइदा छ भनेर जानेर, ती क्षेत्र मा एक गम्भीर विकल्प प्रस्तुत गर्न आएका छन्।
1 ग्यालक्सी बड्स द्वारा प्रस्तुत समाचार
2 उच्च-अन्त सामग्री र डिजाइन
3 ग्यालक्सी बड्स एयरपड्सको लागि एक राम्रो प्रतिद्वन्द्वी
ग्यालक्सी बड्स द्वारा प्रस्तुत समाचार
सामसु'sको ग्यालेक्सी बड हेडफोन अन्तमा डेलिभर गर्दछ क्षेत्रका लागि रोचक समाचार, र यो समय को बारे मा थियो। उनीहरू यस वर्ष पहिलो आगमनको लागि थिए र त्यस कारणका लागि, र किनभने यो सामसु is हो, तिनीहरू सबै बत्तीहरूको विषय हुनेछ। इरादा हाल मार्केटमा उपलब्ध विकल्पहरूसँग भिन्नता ल्याउने हो। हामी देख्दछौं कि सामसु novel्गले कसरी नवीनताहरूमा दमान्छ, र तिनीहरूले तथ्यहरू प्रदर्शन गर्छन् कि यसको अझै ठाउँ छ। सामसु forको लागि राम्रो।
यो एक नवीनता होईन, र यो केहि मोडेलमा पहिले नै अवस्थित छ। ग्यालक्सी बडसँग पछिल्लो संस्करण छ ब्लुटुथ .5.0.० जडान।उपकरणहरूको बीचमा एक अनुकूलता मानक जुन जडान स्थिर र सबै समयमा स्थिर रहन्छ। सामसु आफ्नो नयाँ हेडफोन सुसज्जित छनौट गर्दछ जडानमा स्थिरताको स्तर जुन उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ सम्भव छ। परिणामहरूले यस कनेक्टिविटीलाई समर्थन गर्दछ, र कोरियाली फर्मले यसलाई आफ्नो नयाँ मोडेलमा अनुकूलन गर्दछ।
La वायरलेस चार्जिंग यो हप्ता भरि फिल्टर गरिएको गुणहरू मध्ये एक हो। यो लामो-प्रतीक्षित ग्याजेटको लागि अधिक सकारात्मक पोइन्टहरू जुन हामीलाई वास्तवमै मनपर्‍यो। अरु के छ त, भर्खरको चर्चित सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 मा रिभर्स वायरलेस चार्जिंग पुष्टि गरेपछि, तिनीहरू आदर्श साथी बन्छन्। वायरलेस चार्जिंगले तिनीहरूलाई अर्को अर्को पुस्ताको ग्याजेट बनाउँदछ। शब्द ताररहित अधिक अर्थमा किन्नुहोस्।
सुधारको रूपमा एक नवीनता भनेको बढेको ब्याट्री प्रदर्शन हो। नयाँ सैमसंग हेडफोन सुविधा ए 58००० mAh ब्याट्री उनीहरूले के वाचा गर्छन् प्रयोगको hours घण्टा सम्म निरन्तर यसको पूर्ववर्ती भन्दा धेरै। यसबाहेक, सँगै एकल १ minute मिनेट चार्ज यसको अवस्थामा हामी रमाउन सक्छौं अतिरिक्त घण्टा र स्वायत्तताको आधा।
हामी संग संवेदनशील सतह छुनुहोस् जसको साथ हामी संगीत र कलहरू नियन्त्रण गर्न अन्तरक्रिया गर्न सक्छौं। बाहेक सामसु voice आवाज सहायक, Bixby, यसलाई सामेल गरिएको छ ताकि तिनीहरू आफ्नो क्षमताको उत्तममा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको मजा लिन सक्छन्।
उच्च-अन्त सामग्री र डिजाइन
सामसुले आफ्नो वायरलेस हेडफोनको नयाँ संस्करण प्रस्ताव गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ जुन पार गर्यो धेरै कारणका लागि। आइकन Xs ले निर्माता द्वारा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकेन। र विचार यो छ कि यो फेरि हुँदैन। एक गरीब गुणवत्ता हेडफोन बिना, तिनीहरूको बिक्री भूमिबाट कहिल्यै गएको छैन र यो लगभग यसको सुरुवात देखि स्थिर थियो।
स्वायत्तता आइकन एक्स को महान Achilles हील थियो। यद्यपि AirPods को प्रक्षेपण संग समय मा बाँच्न पनि सजिलो थिएन। अब एक नवीकरण गरिएको मोडेलको साथ र सबै भन्दा धेरै सुसज्जित, सामसुले आजका बजारमा सब भन्दा कार्ड हेडफोनहरूको साथ टेबलमा कार्डहरू राख्दछ.
हामी यसबाट सुरू गर्दछौं उच्च गुणस्तरका सामग्रीहरूर एक समाप्त हुन्छ जुन हामीले आशा गर्न सक्दछौं। रंगको छनौट पनि बुद्धिमानी हुन्छ। सेतो रंग यस हेडफोन मोडेलमा ठूलो देखिन्छ, र केस / चार्जरको लुक धेरै आकर्षक छ। हामी तिनीहरूलाई कालो, सेतो र पहेलो रंगमा फेला पार्न सक्छौं।
हेडफोन एक ढाँचा कल छ आन्तरिक, ती हुन् जुन प्राय कानमा भित्र छन्। त्यो ढाँचा कि त तपाइँ यसलाई मन पराउनुहुन्छ वा तपाइँ यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। "नकारात्मक पक्ष" तिनीहरू प्राय: प्रस्तुत गर्दछन् इष्टतम समायोजन स्तर प्राप्त गर्न गाह्रो छ कसैको लागि। कानमा आदर्श तरीकामा राखिएको छैन यो सम्भव छ कि हामीले प्राप्त गरेको गुणस्तरको अनुभूतिसँग उपकरणले प्रदान गर्न सक्षम भएको कुरासँग केहि गर्न सक्दैन.
एक उत्तम फिट प्राप्त गर्न र ध्वनिको मजा लिनको लागि तिनीहरूले यसको सबै भव्यतामा प्रस्तुत गर्दछ, सामसु includes समावेश गर्दछ "रबर्स" को तीन बिभिन्न आकारहरूत्यो कान भित्र भित्र जान। एक उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता अनुभव र औसत एक बीचमा भिन्नता बनाउन सक्ने एक विवरण।
ग्यालक्सी बड्स एयरपड्सको लागि एक राम्रो प्रतिद्वन्द्वी
J. J ज्याक हेडफोन पोर्टको अधिक र अधिक यन्त्रहरूमा अनुपस्थितिको कारण, वायरलेस हेडफोन भर्खरको समयमा सबैभन्दा "आवश्यक" ग्याजेटमा छन्। वायरलेस हेडफोन हुनु त्यस्तो चीज हो जुन हामी अन्य धेरै सामानहरूमा प्राथमिकता पाउँछौं। र यदि हामीलाई पनि चार्जिंगका लागि केबुलहरू आवश्यक पर्दैन, राम्रो, धेरै राम्रो।
स्मार्टफोनको नयाँ मोडेलहरूको साथमा कुनै अप्ठ्यारो एडाप्टर कुनै हेडसेट प्रयोग गर्न सक्षम हुन आवश्यक पर्दछ। बजार विकसित हुँदैछ भन्ने दरलाई ध्यानमा राख्दै, केबलहरू अप्रचलित हुँदैछन्। सामसुले यस प्रवृत्तिसँग मिल्दछ क्वालिटी मोडेल प्रदान गरेर र पर्याप्त सुविधाहरूको साथ कुनै जटिल छैन।
ग्यालक्सी बुड देखि प्रस्थान धेरै सावधान डिजाइन यो दृष्टिबाट राम्रोसँग जान्छ। यद्यपि हामी भन्न सक्दछौं कि तिनीहरू अरू धेरै उपकरणहरू जस्तै देखिन्छन्। यो सराहना गरिन्छ कि तिनीहरूमा "प्रेरणा" छैन हराउन प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी, एयरपडहरू। एक अद्वितीय र वास्तविक उत्पादन प्रस्तुत गर्न अधिक र अधिक जटिल हुँदै गइरहेको छ, र सामसु Samsungले यो प्राप्त गर्न प्रयास गरिसकेको छ।
तिनीहरूको विशिष्टता, तिनीहरूको डिजाइन र उनीहरू प्रस्ताव गर्न सक्षम भएको सबै कुरालाई विचार गर्दा हामी यो भन्न सक्छौं AirPods ले अब सिंहासन समात्दैन। यदि तिनीहरूसँग यो थियो भने। थप रूपमा, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यी नयाँ हेडफोनको मूल्य हामी आशा गरेभन्दा कम हुनेछ। यसको मूल्य १ 130० डलर हुनेछ, एयरपड्सको हालको मोडेलको मूल्य के छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » प्रस्तुतिकरण » नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी बड ब्लुटुथ हेडफोनहरू भेट्नुहोस्
यो ग्यालेक्सी फिट हो, नयाँ सामसु activity गतिविधि ब्रेसलेट
यो स्मार्ट वाच सैमसंग ग्यालेक्सी वाच एक्टिभ छ